Codsiga Goynta Plamsa Plamsa ee Warshadaha Been Abuurka
Sannadihii ugu dambeeyay, tikniyoolajiyadda goynta plasma waxay ku aragtay horumar degdeg ah warshadaha sameynta birta. Dhuumaha birta ama H dogobka ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee been abuurka, iyo goynta plasma waxay beddeli kartaa qaar ka mid ah hababka dhimista iyadoo la adeegsanayo caaryo waaweyn oo adag, si weyn u yareynaya waqtiga wax soo saarka iyo hoos u dhigista qiimaha ...
KF6015 4KW Fiber Laser Goynta Mashiinka la dhoofiyey
Mashiinka goynta laser-ka ee loo yaqaan 'KNOPPO KF6015 4000W Fiber laser' ayaa si guul leh loo soo raray loona geeyay Ruushka. Mashiinka goynta laser-ka KF6015 4000W fiber cut wuxuu yareyn karaa ugu badnaan 22mm steel carbon iyo 12mm ahama, sidoo kale wuxuu jari karaa birta khafiifka ah, birta daawaha ah, birta la shiray, silsiladda birta, birta guga, xaashi titanium, gal ...
Waxqabadka Dallacaadda Juun, 2021! KNOPPO LASER!
Bishaarayn, waxaan heli doonaa sanadle ah nus dallac bisha Juun, 2021, hal mar oo keliya sanadkiiba, HA KU MALGELIN. Waxaan rajeyneynaa inaan wada shaqeyn karno oo aan dhisi karno xiriir ganacsi oo muddo dheer ah. Laser-ka loo yaqaan 'KNOPPO laser' waa bixiye xalal ah oo xalka laser-ka bixiya oo isku dhafan R&D, wax soo saar iyo suuq geyn midba, o ...
Sidee Fiber Laser Goynta Machine Codsiga In Sheet Birta Warshadaha
Dhammaan mashiinnada goynta leysku waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda, sida co2 laser, Yag laser iwm, laakiin waxay umuuqataa in faa'iidooyinka mashiinka goynta laser-ka ay aad uga badan yihiin mashiinnada kale ee goynta laser-ka. Goynta leysarka Fiber wuxuu bilaabay inuu helo feejignaan dheeri ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, leysarka fiber-ka ...
Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee loo yaqaan 'KNOPPO H Beam Cutting Enter' wuxuu gala Suuqa Indonesia
Mashiinka Goynta Beam-ka ee loo yaqaan 'KNOPPO H Beam Cutting Machine' ayaa si guul leh loo raray oo la geeyay dalka Indonesia. Mashiinka Goynta beam-ka H waa qalab goyn muuqaal ah oo si madax banaan ay u soo saartay warshadeena. Waxay ka heshay amaan la isku raacsan yahay macaamiisha iyo kuwa ka ganacsada guriga iyo dibada. Macaamiisha Australia, Indooniisiya ...
Astaamaha Mashiinka Alxanka Xararad ee Fudud Gacmeed
Mashiinnada alxanka fiber-ka ee gacanta lagu qaato ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa alxanka qalabka yar yar, alaabta birta ka sameysan ee birta ah, armaajooyinka iyo weelka miisaska, foornooyinka, wiishashka, armaajo, albaabbada birta birta ah, qalabka kiechen iyo tareenada daaqadaha, sanaadiiqda korantada iyo warshadaha kale. Alxanka laser fiber waxaa inta badan loogu talagalay ...
Maxay soo saarayaal badani ugu jeesanayaan inay ku gooyaan leysarka fiber
Xaqiijinta sare, xawaaraha sare iyo tayada goynta leysku waxay ka dhigtay teknolojiyadda xulashada wax soo saarka horumarsan ee warshadaha aan la tirin karin. Iyada oo leysarka fiber-ka, goynta leysku ay noqotay xal lagu kalsoonaan karo oo aad qaali u ah, taasoo keentay korsashada oo kordheysa birta oo dhan ...
Faa'iidooyinka dalabka mashiinka goynta laser-ka
Goynta Laser waa teknolojiyad sare oo tiknoolaji ah, oo isku dhafan indhaha, qalabka sayniska iyo injineernimada, soo saarida mashiinada, teknolojiyadda kontoroolka CNC iyo teknolojiyada elektarooniga ah iyo farsamooyin kale, waqtigan xaadirka ah, waa barta ugu kulul ee caadiga ah ee cilmiga sayniska & tignoolajiyada iyo aniga. ..
Safarka adduunka ee KNOPPO ee TOLEXPO 2021
KNOPPO waxay si guul leh kusoo gaba gabeysay socdaalkeedii Lyon TOLEXPO 2021, oo lagu qabtay France Lyon intii u dhaxeysay 16-kii ilaa 19-kii Maarso. Laga soo bilaabo bandhiggii ugu horreeyay ee 2005, bandhigga Tolexpo wuxuu xaqiijiyay booska hoggaamineed ee Faransiiska oo ah dhacdo gebi ahaanba loogu talagalay mashiinka wax soo saarka iyo farsamada farsamada ...
Maxay dad badani u doortaan mashiinka goynta leysarka fiber-ka?
Maxay dad badani u doortaan mashiinka goynta leysarka fiber-ka? Shan qodob oo taagan oo ah mishiinnada goynta leysarka fiber ayaa laga yaabaa inay ka jawaabaan: 1. Tayada sare ee dogob: cabbirka yar ee barta, waxtarka shaqada oo sareeya iyo tayada wax soosaarka oo wanaagsan; 2. Xawaaraha goynta degdega ah: qiyaastii laba jeer xawaaraha goynta CO2 laser m ...
Saamayn Ku Yeelanaya Waxyaabaha Tayada Goynta Tayada Mashiinka Goynta Fiber Laser
Saameeya Waxyaabaha Tayada Goynta Mashiinka Goynta Fiber Laser 1. Dhererka Goynta Sida ku cad jaantuska hoose, haddii masaafada u dhexeysa mashiinka iyo qeybta shaqada ay aad u gaaban tahay, waxay sababi kartaa isku dhaca saxanka iyo mashiinka; haddii masaafada dheertahay, waxay sababi kartaa gaaska diffusio ...
Waxqabadka biiyaha On Mashiinka Goynta Laser Fiber
Hawlaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Fiber Laser ee Maska Masaarida naqshadeynta mashiinka kala duwan, qulqulka qulqulka hawada ayaa ka duwan, taas oo si toos ah u saameysa tayada goynta. Hawlaha ugu muhiimsan ee sanka waxaa ka mid ah: 1) Ka-hortagga qorraxda inta lagu jiro goynta iyo dhalaalida ka-boodka kor u kaca ...